Miaina, mitia, mihomehy | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 20, 2007 Sabotsy, Oktobra 20, 2007 Douglas Karr
Betsaka ny eritreritra no nataoko tato ho ato ary nanjary tononkalo niaraka tamin'ny zanako lahy teo amin'ny fiainana, ny fitaizana, ny asa, ny fifandraisana, sns. Tonga eo aminao tsikelikely ny fiainana ary terena ianao handray fanapahan-kevitra izay tsy tadiavinao mihitsy.
Dingana 1: Fanambadiana
Tokony ho 8 taona lasa izay dia ny fisaraham-panambadiana no nataoko. Tsy maintsy nieritreritra aho hoe afaka miatrika ny maha-ray 'faran'ny herinandro' na tsia. Ity farany no nofidiako satria tsy ho velona aho raha tsy eo ny zanako.
Nandritra ny fisaraham-panambadiana dia tsy maintsy nitady izay karazana lehilahy aho. Moa ve aho ho lasa vady taloha tezitra izay nisarika ny vadiny taloha hiditra sy ivelan'ny fitsarana, niteny ratsy ny zanany taloha tamin'ny zanany lahy, sa handray ny fitahian'ny fananako ny zanako ary handeha amin'ny làlambe. Mino aho fa nandray ny làlambe. Mbola miresaka amin'ny vadiko taloha foana aho ary mivavaka ho an'ny fianakaviany aza indraindray fantatro fa sahirana izy ireo. Ny marina dia, tsy dia misy angovo firy amin'ity fomba ity ary tsara kokoa noho izany ny zanako.
Dingana 2: Asa
Eo am-piasana dia mila mandray fanapahan-kevitra ihany koa aho. Namela asa tsara mihoatra ny vitsivitsy aho tao anatin'ny folo taona lasa. Namela iray aho satria fantatro fa tsy ho tonga amin'izay tadiavin'ny lehibeko mihitsy aho. Nandao iray hafa aho vao tsy ela akory izay satria tsy tanteraka ny tenako. Ao amin'ny a asa mahafinaritra izao izany no mihaika ahy isan'andro ... saingy fantatro fa tsy ho eto mandritra ny folo taona intsony aho eto izao.
Tsy hoe manana fisalasalana aho fa vao maika mahazo aina amin'ny 'akany' amin'ny Marketing sy Teknolojia. Tiako ny mihetsika haingana any am-piasana. Rehefa miadana ny raharaha ary mila ireo fahaiza-manao tsy mahaliana ahy ny orinasa dia tsapako fa tonga ny fotoana hirosoana (ao anatiny na any ivelany). Fantatro fa rehefa miasa amin'ny heriko aho dia olona sambatra kokoa noho ny manahy momba ny fahalemeko.
Dingana 3: Fianakaviana
Manakaiky ny 40 taona aho izao ary tonga amin'ny teboka iray amin'ny fiainako izay tokony handraisako fanapahan-kevitra amin'ny fifandraisako ihany koa. Taloha, nandany hery be tamin'ny fananana fianakaviana iray 'reharehako' aho. Amin'ny lafiny maro, ny hevitr'izy ireo dia zava-dehibe kokoa noho ny ahy. Rehefa nandeha ny fotoana dia tsapako fa norefesin'izy ireo tamin'ny fomba hafa tsy misy hafa ny fahombiazako.
Ny fahombiazako dia refesin'ny fahasambaran'ny zanako, ny kalitao sy ny habetsaky ny finamanana mafy orina, ny tambajotran'ireo mpiara-miasa amiko, ny fanajana azoko any am-piasana, ary ny vokatra sy serivisy omeko isan'andro. Mety ho hitanao fa tsy tao ny lohateny, laza na harena. Tsy izany ary tsy hisy intsony.
Vokatr'izany, ny fanapahan-kevitro dia ny hamela olona any aoriana izay manandrana misintona ahy midina fa tsy manandratra ahy. Manaja, tia ary mivavaka ho azy ireo aho, saingy tsy handany hery amin'ny fiezahana hampifaly azy ireo intsony. Raha tsy mahomby amin'ny hevitr'izy ireo aho dia afaka mitazona ny heviny izy ireo. aho tompon'andraikitra amin'ny fahasambarako ary tokony hanaiky ny andraikiny izy ireo.
Amin'ny maha-ray ahy dia faly aho hoe iza ny zanako amin'izao fotoana izao, ary tiako izy ireo tsy misy fepetra. Ny resadresaka ataontsika isan'andro dia momba ny zavatra vitany, fa tsy tamin'ny tsy fahombiazany. Izany dia nilaza fa sarotra amin'ny zanako aho raha tsy miaina mifanaraka amin'ny mety ho vitany.
Nihena be ny naotin'ny zanako vavy tamin'ny herinandro lasa teo. Heveriko fa ny ankamaroany dia ny fiainam-piarahamoniny no nanjary zava-dehibe noho ny asan'ny fianarany. Nanaintaina azy izany rehefa nahazo ny naotiny. Nitomany tontolo andro izy satria mpianatra A / B matetika. Tsy ny fahadisoam-panantenako no hita, fa ny fahadisoam-panantenany.
Katie dia tia mitarika ao am-pianarana ary mankahala ny ho any ambany. Nanao fanovana vitsivitsy izahay - tsy nisy namanay nitsidika tamin'ny alina sy tsy makiazy. Ny makiazy no sarotra… Tena noheveriko fa handoro lavaka amiko izy amin'ny masomaso. Tao anatin'ny herinandro anefa dia nanomboka niverina ny naotiny. Tsy mandrehitra lavaka amiko intsony izy, ary nihomehy ahy mihitsy aza ny androny tao anaty fiara.
Fihetsika mahery vaika avo lenta io, fa manao izay tsara indrindra vitako aho mba hanamafisana ny lafy tsara fa tsy ny ratsy. Miezaka mitarika azy ireo mankany amin'ny làlan'ny ranomasina mahafinaritra aho, tsy mampahatsiahy azy ireo ny tafio-drivotra aoriany intsony.
Rehefa mahazo aina amin'ny zanako ny zanako, lasa tiako kokoa ny hoe lasa iza izy ireo. Gaga ahy isan'andro ry zareo. Manan-janaka mahatalanjona aho… saingy tsy diso ny fiheverako hoe iza no 'heveriko fa tokony ho izy' na 'ahoana no tokony hataon'izy ireo'. Ho hitan'izy ireo izany. Raha faly amin'ny tenany izy ireo, ny lalan'izy ireo amin'ny fiainana ary miaraka amiko… dia faly ho azy ireo aho. Ny fomba tsara indrindra azoko ampianarana azy ireo dia amin'ny fampisehoana azy ireo ny fihetsiko. Hoy i Buddha: "Izay mahita ahy mahita ny fampianarako." Tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho.
Dingana 4: Fifaliana
Tadidiko a fanehoan-kevitra fotoana fohy avy amin'ny 'namana virtoaly' tsara, William izay nanontany hoe: "Fa maninona ny Kristiana no mila mamantatra ny tenany foana?". Tsy novaliako mihitsy ilay fanontaniana satria tsy maintsy nieritreritra betsaka momba izany aho. Marina ny azy. Kristiana maro no manambara hoe iza izy ireo miaraka amin'ny fihetsika 'masina kokoa noho ianao'. Manana ny zony hanoherana ny olona momba an'io i William. Raha mametraka ny tongotrao ianao, dia miomàna hamaly ny antony nahatongavanao tao!
Tiako ho fantatry ny olona fa Kristiana aho - tsy hoe satria iza aho fa satria izay antenaiko ho indray andro any. Mila fanampiana amin'ny fiainako aho. Te-ho olona tsara fanahy aho. Tiako ny namako hahafantatra ahy ho toy ny olona iray izay niahy, namitsiky ny tarehin'izy ireo, na nanome aingam-panahy azy ireo hanao zavatra hafa amin'ny fiainany. Rehefa mipetraka eo am-piasana aho miasa miaraka amina mpivarotra maditra na bibikely izay saika hikirakira olana manodidina ahy dia mora amiko ny manadino ilay sary lehibe ary manonona teny vitsivitsy. Mora ho ahy ny tezitra amin'ireo olona ao amin'ilay orinasa izay manome ahy fotoan-tsarotra.
Ny fahitako (voafetra) ny fampianarana inoako inoana dia milaza amiko fa ireo olona ao amin'ilay orinasa hafa dia mety miasa mafy, manana olana izay ezahin'izy ireo resena, ary mendrika ny faharetana sy fanajana aho. Raha lazaiko aminao fa kristiana aho dia manokatra ahy amin'ny fitsikerana izany rehefa mpihatsaravelatsihy aho. Mpihatsaravelatsihy aho (matetika loatra) ka aza misalasala mampahafantatra ahy fa tsy Kristiana tsara aho, na dia tsy mitovy finoana amiko aza ianao.
Raha afaka mamantatra ny dingana 4 aho, dia avelako ho olona sambatra tokoa ity tontolo ity. Fantatro fa hiaina fifaliana marina aho… Nahita an'izany karazan'olona izany aho ary tiako ho ahy izany. Ny finoako dia milaza amiko fa zavatra Andriamanitra te izaho hanana. Fantatro fa misy io zavatra azo alaina io, saingy sarotra ny mandà ny fahazaran-dratsy ary manova ny fontsika. Mbola hanohy azy io ihany aho.
Manantena aho fa tsy dia mailaka loatra ity lahatsoratra ity ho anao. Nila namoaka kely momba ny olan'ny fianakaviako aho ary nanampy ahy tamin'ny fomba mangarahara ny fanoratana mangarahara. Angamba hanampy anao koa izany!
Tags: marikafamelabelaranadokambarotraslidesharefitomboana amin'ny fampisehoanasm politikany swan maintywp_footerwp_head
20 Okt 2007 amin'ny 3:45 PM
20 Okt 2007 amin'ny 4:04 PM
20 Okt 2007 amin'ny 10:54 PM
21 Oktobra 2007 à 1:53
21 Oktobra 2007 à 8:18
21 Oktobra 2007 à 5:25
21 Oktobra 2007 à 8:30
21 Oktobra 2007 à 9:28
21 Oktobra 2007 à 10:24
21 Oktobra 2007 à 10:59
21 Okt 2007 amin'ny 9:20 PM
21 Okt 2007 amin'ny 4:55 PM
21 Okt 2007 amin'ny 9:21 PM